Puntland oo kulan deg deg ah iskugu yeertay Culumada Garoowe, siiseyna Digniin adag.
October 19, 2019 Mahad Jama 2
Wasiirka wasaarada Cadaalada arimaha Diinta Dastuurka dhaqan celinta Puntland Awil Shiikh Hamid ayaa maanta kulan dagdag ah iskugu yeeray Culimada Magaalada Garowe, kalana hadlay inay ka shaqeeyaan nabadgalyada Guud ee Puntland.
Wasiirka ayaa si kulul oo aan horay loo arag ula hadlay wadaada sheegayna wixii siyaasada Dawlada ah in hogaan uleeyahay dalku aana cidna laga yeelayn kicinta Bulshada.
Si gaar ah ayuu ula hadlay shiikh Mukhtaar Ahmed Farah oo shalay Khudbad ka jeediyay Masjidka Huda ku soo qaaday xafladii Caleema saarka madaxweynaha Juballand waxaana wasiirku uu ku eedeeyay inuu shalay danbi ka galay dalka loona baahanyahay inuu raaligalin ka bixiyo, waxaana usheegay inuusan xaq ulahayn inuu shiikhu ka hadlo waxa kismaayo ka dhacay bulshada Puntland hogaankeeda oo kaliya ay wakiil uga yihiin.
Culimada ayuu sheegay wasiirka in lagu dhexjiro oo qaarkood aad moodo inay shaqooyin kale hayaan.
Wasiirku waxa uu soo hadal qaaday in Puntland aysan ka soo horjeedin Dawlada Federaalka Lkn hogaanka waqtigan aysan diyaar uhayn inay la shaqeeyaan maamulada waxaa uu xusay in dawlada Puntland ee waqtigaan ay casuntay madaxda Dawlada Federaalka iyo madaxda maamulada kale.
Wasiirka ayaa sidoo kale beri la balamay guddiga nabadgalyada Gobolka Nugaal.
XIGASHO: FAHAD BISLE
Waxan ku sheegi kara wixi kismayo ka dhacay wax qaldan inay ahayd. Hadi hogan la adeecayo in diyarado qasa oo dhumasha kismayo lagutago may ahen. Adan bare ducale oo adon kenya wadato ah. In loohogto may ahen. Sheeq sharif iyo xasan sheeq oo qaran dumis ahna in wado lala qaado may ahen. Gari aley taqaan
Axmed madoobe oo isna suuku joogo ala ogyaha oo daba dhilif kenya wadata ah in la hor fariisto may ahen. Umada ama culumada warun inay hogan adecan. lkn wixi qaldan umadu kama amusi karto.